ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား သြစတီးယား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ The Hon John Hogg တို့တွေ့ ဆုံ နှုတ်ဆက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား သြစတီးယား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ The Hon John Hogg တို့တွေ့ ဆုံ နှုတ်ဆက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား သြစတီးယား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ The Hon John Hogg တို့ မနေ့ နံနက်၁၁နာရီ တွင်အမှတ်၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနေအိမ်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား လာရောက်တွေ့ ဆုံ နှုတ်ဆက် ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
Daw Aung San Suu Kyi meet with Senator The Hon John Hogg, President of the Senate of Australia , at 11:00am,Today. Photo-Sunny — at No. 54, University Avenue, Yangon.
စာရေးသူ kotun အချိန် 4/27/2013